YEYINTNGE(ကနဒေါ): Saturday, September 07
“အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့က ဒီဒေသမှာ မနေချင်တာ ကြာပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ အဘိုးအဘီးတွေက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ တက္ကန(ဖ်)နယ်စပ်မြို့ကပါ။ မှတ်မှတ်ရရ (၁၉၈၉)ခုနှစ်မှာ ဒီကိုဝင်လာတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အဖေအမေတွေလည်း ဒီမှာပဲ ခေါင်းချသေဆုံးသွားတာ ဖြစ်တယ်။ ၂၀၁၂ခုနှစ် အဖြစ်အပျက် တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ အမြင်လွဲမှားမှုတွေနဲ့ ခါးခါး သီးသီးမုန်းတီးသွားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ရဲ့ ထာဝရလုံခြုံမှုထွက်ပေါက်နေရာ တစ်ခုကိုအခြေချဖို့ သွားချင်တာပါ”ဟု မောရ ၀တီကျေးရွာအနီး အလယ်သံကျော် ဘင်္ဂါလီကျေးရွာမှ အသက်(၅၀)၀န်းကျင်ရှိ ဘဂါင်္လီလူမျိုး ဦးအဒူရောင်းက ပြောသည်။
BY YeYint Nge ... 9/07/20130comment
တက်ရောက်ခွင့် မပြုသည့် ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရား တချို့ပေါ်သို့ နိုင်ငံခြားသားများ တက်ရောက်မှုရှိနေ
Saturday, September 7,2013
ပုဂံဒေသတွင် တက်ရောက်ခွင့်မပြုသည့် ရှေးဟောင်းဘုရား တချို့အပေါ်၌ နိုင်ငံခြားသားများ တက်ရောက်နေခြင်းသည် မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။
ဧည့်လမ်းညွှန် မပါသော၊ FIT ခရီးသွား တချို့သည် ရှေးဟောင်း သုတေသနဌာနမှ ခွင့်ပြုထားခြင်းလည်း မရှိသည့် ရှေးဟောင်း ဘုရားတချို့ အပေါ်တွင် နံနက် သို့မဟုတ် ညနေခင်း ဘက်များတွင် တက်ရောက်ကာ ပုဂံရှုခင်းများ ကြည့်ရှုလေ့လာမှု ပြုနေခြင်းသည် မတော်တဆ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပြားလှကြောင်း ဒေသခံဧည့်လမ်းညွှန်များ၊ ခရီးသွား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် သူများက ပြောဆိုကြသည်။
''တစ်ခါတုန်းကလည်း ၀က်ကြီးအင်းဂူ ပြောက်ငယ်ပေါ်က အမျိုးသမီးတစ်ဦး လိမ့်ကျသေဆုံးမှု ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်'' ဟု ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံခြားသား FIT ခရီးသွားများသည် တက်ရောက်ရန် ခွင့်ပြုချက် ပေးမထားသည့်အပြင် တက်ရောက်ရန် ခက်ခဲသည့် ရှေးဟောင်း ဘုရားများပေါ်တွင် တက်ရောက်လေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။ ''နေ၀င်ချိန်ကြည့်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးထားတဲ့ ရွှေဆံတော်လို ဘုရားမှာတောင် မတ်စောက်လွန်းလို့ ဖြစ်နိုင်ရင် လေးဘက်လေးတန်ကို အတက်လမ်း၊ အဆင်းလမ်း သီးခြားစီ ခွဲခြားထားဖို့ သင့်ပါတယ်။ မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင်ပါ'' ဟု ဧည့်လမ်းညွှန် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ပုဂံရှေးဟောင်း ဘုရားပေါ်သို့ တက်ရောက်နေသည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများအား တွေ့ရစဉ်
Miss Supranational(2013) ဆုကို ဖိလစ်ပိုင်မယ်က ရရှိ
beauty of Mutya Datul, Miss Supranational 2013, from the Philippines!
ဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဟုဆိုသော အသံများကြာနေရသည်မှာ (၁၀)နှစ်ခန့်ပင်ရှိပါပြီ။ ဤကဲ့သို့ တကျော်ကျော်အော်ပြောသံ ကြားနေရသော်လည်း မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့် အကျုံး မ၀င်ပါလား။ ဘာ့ကြောင့်လဲ? စိုက်ပျိုးရေသုံးသည့် ဆည်မြောင်းများ ဥပဒေများကို မျက်ကွယ်ပြု၍ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသုံးလျက် မြောင်းပေါ်မှာ အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးခြင်း၊ ရေမြောင်းဘေးမှာ အရံထားသောမြေများကို အကွက်ရိုက်၍လည်း ရောင်းချပေးပြီး ဂရန်ပေးခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း ပြုလုပ် နေပါသည်။ ယခု မန္တလေးအရှေ့ပိုင်းရှိ ရေနီမြောင်းကြီးသည် အထင်ကရပါ။ ယခု ဦးရဲမြင့်က ကြံကြံ ဖန်ဖန် နေရာရှားလို့ ရေနီမြောင်းဘေးနှင့် တလျှောက်မြေကို အိုးအိမ်ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးခြင်းသည် ဆည်မြောင်းစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် တားမြစ်ချက်များကို ဂရုမပြု လုပ်လိုက်ခြင်းသည် ဥပဒေအပေါ်က အရှင်သခင်တစ်ပါးမဟုတ်တော့ ဘယ်ဟာလို့ပြောရန်ကျန်ပါသေးလဲခင်ဗျာ။
ရေမြောင်းဘေးတလျှောက်မြေကို (၆၀ x ၉၀) ကွက်ရိုက်၍ Mother Love Co ကိုပေးထားပြီး သူ့ဇနီး၊ သားသမီးများအမည်ဖြင့် ယူထားသော အကွက်များလည်းရှိပါသည်။ ဇနီး၊ သားသမီးများနှင့် တပည့်များသည် မြေကွက်များ၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူထားသော လုပ်ငန်းများကို တစ်ဆင့် ၀ယ်သူရှာပုံတော်ဖွင့် အလုပ်ရှုပ်၊ ခြေသွက်နေပုံကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကန်ထရိုက်များကို မေးကြည့်ပါ။ စနည်းနာကြည့်ပါ။ ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် သားသမီးများ၏ တရုတ်မိတ်ဆွေများ၊ အခြားလုပ်ငန်းရှင်များ တရုံးရုံးနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေပုံကို လက်တွေ့ဆင်းကြည့်ပါတော့ခင်ဗျား။
မန္တလေးမြို့ကြီးသည် ရှေးမြန်မာမင်းများမှစ၍ ရပ်ကွက်တွင်း အိမ်များနောက်တွင် နောက်ဖေး လမ်းကြားများကို (၁၀)ပေအကျယ်ခန့်ထားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် မီးဘေးကိစ္စ၊ အခြား အရေးကြီးကိစ္စ တို့တွင် အသုံးပြုရန် သတ်မှတ်ထားရှိခဲ့သည်။ အဆက်ဆက် တာဝန်ရှိသူများလည်း လိုက်နာထိန်းသိမ်း ထားခဲ့သည်။ စည်ပင်ဌာန၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ဥပဒေများလည်း ရှိထားပါသည်။ သို့သော် ၀န်ကြီးချုပ်က ရာထူးအာဏာသုံး၍ သူ့သားသမီးများ၏ မြေကွက်များ၏ နောက်ဖေးလမ်းကြားမြေအား ထည့်သွင်း၍ ဂရန်ရယူထားပါသည်။ ကွင်းဆင်းကြည့်လျင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လျင် တည်ဆဲဥပဒေ စည်းမျဉ်းများ ကို အာဏာဖြင့် ဘေးဖယ်၍ ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းသည် ဥပဒေအထက် ဆင်စီးနေသလိုဖြစ်မနေပေဘူးလား။
သို့ပါ၍ သမ္မတကြီး၏ လူထုဗဟိုပြုစနစ်ကျင့်သုံးရေးနှင့် သန့်ရှင်းသောအစိုးရ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်နိုင်ခြေ မရှိနိုင်ပါကြောင်းပါခင်ဗျား .......။
ဆက်သွယ်ရေး တင်ဒါအောင်မြင်ထားပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ စတင်ဆောင်ရွက်တာ့မည့် တယ်လီနောမြန်မာကုမ္ပဏီက ရာထူးနေရာ တစ်ခုလျှင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ရာထူးနေရာ ၁၄၆ နေရာအတွက် မြန်မာဝန်ထမ်းများ စတင်ခေါ်ယူပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
“ဒီနေ့စခေါ်တာပါ။ ရာထူးက တစ်ရာကျော်ရှိတယ်။ အရင်က ၂၇ နေရာပဲ ခေါ်ထားတာ။ အခုရာထူး အရေအတွက် ထပ်တိုးခေါ်တာ” ဟု တယ်လီနောမြန်မာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အွန်လိုင်းငွေချေစနစ် သုံးစွဲမှုမတွင်ကျယ်သေးတဲ့ နိုင်ငံမှ Miss Internet ဆုရလို့အံ့အားသင့်
Miss Supranational Myanmar - ခင်ဝင့်ဝါရဲ့ပရိသတ်များအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာသတင်းကောင်းလေး တင်ပြလိုပါတယ်။
Miss Supranational 2013 ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ခင်ဝင့်ဝါဟာ နိုင်ငံနဲ့ လူမျိုးအတွက် တာဝန်ကျေပွန်စွာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ပြိုင်ပွဲဒိုင်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ Mr Carsten က Miss Myanmar ဟာ online voting မှာ မဲ မရခဲ့ရင်တောင် အကဲဖြတ်ဒိုင်များအားလုံးက စကာတင်လက်ရွေးစင် Finalist စာရင်းဝင် အဖြစ် ရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ပြုစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
ထို့ ပြင် အွန်လိုင်းငွေချေစနစ် Credit/Debit Card သုံးစွဲမှုမတွင်ကျယ်သေးတဲ့ နိုင်ငံမှ Miss Internet ဆုရရှိအောင် မခင်ဝင့်ဝါအတွက် မြန်မာပရိသတ်များမှ ပံ့ပိုးအားပေးမှုကိုလည်း အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်မီ မြန်မာအလှမယ် တစ်ဦးကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Miss Supranational Myanmar Organization အတွက်လည်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ချီးကျူးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
Message from Mr. Carsten
(Chief Advisor to President of Miss Supranational Organization)
You sentanice young lady. Myanmar fans loved her.
She would have made it even without the internet voting into the TOP 20.
And although you pointed out that Myanmar lacks electronic payment options, her fans found ways.
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအစိုးရ လက်ခံပါက မောင်တောဒေသဧည့်နေဘဂါင်္လ...
တက်ရောက်ခွင့် မပြုသည့် ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရား တချို့ေ...
အွန်လိုင်းငွေချေစနစ် သုံးစွဲမှုမတွင်ကျယ်သေးတဲ့ နိုင...